Nyefee ma ọ bụ site na Basel & Zurich Airport | Ọrụ Switzerland dum
Basel Service Transfer, ọrụ ụgbọelu gị ma ọ bụ site na ọdụ ụgbọ elu nke Basel na Zurich. Switzerland si.
Emeela ka ego dị mma, kpọọ anyị n'ejighị ọrụ maọbụ jiri ụdị kọntaktị anyị dị n'okpuru ebe a.
Mee ugbu a ma kwụọ ụgwọ mgbe ị na-agba ọsọ.
NCHỌPỤTA / IJI
(Anyị ga-aza n'ime 1 awa.)
Ị na-achọ ụgbọ elu ụgbọ elu na Basel ma ọ bụ Zurich? Mgbe ahụ anyị na-atụ anya ịnụ gị.
Anyị na-ejikọta nkasi obi nke ọrụ taxi a pụrụ ịdabere na ya site n'inwe mmetụta dị mma nke ijere ọrụ dị mma nke ọrụ limousine anyị.
Anyị ga-eji obi ụtọ kpoo gị tinyere akpa na ọdụ ụgbọ ala Basel ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ dị na Switzerland. Ị nwere ike ịkọrọ anyị site na kọntaktị gị ụdị ọchịchọ gị.
dika Basel City Airport Basel Chf 40.-
Ntụfe mbụ na nke ọnụ ala ọdụ ụgbọ ala maka Basel na Zurich
Ọrụ ụgbọelu anyị na-enyefe ụgbọelu na Airport Basel na-eburu gị ngwa ngwa na ụgbọelu ma ọ bụ laghachi n'obodo. Karịsịa n'ọdụ ụgbọelu, ọ na-emekarị njem na onye na-agagharị oge niile, maara otú e si achọpụta ebe ị na-adọba ụgbọala na ọdụ ụgbọ elu. Anyị dịka ụlọ ọrụ ndị taxi na-enye gị ihe ngwọta na ọrụ nnyefe ụgbọelu anyị na-ejikwa nlezianya mee njem na ọdụ ụgbọ elu.
Ụgbọ mmiri na-ebufe site na taxi gaa ọdụ ụgbọ elu n'èzí
Na mgbakwunye, anyị na-amanye gị gaa n'ebe ndị ọzọ na Switzerland na nso France na Germany. Ọ bụ ezie na ọdụ ụgbọ mmiri Basel dị ukwuu, ọ bụghị mgbe nile na-enye njikọ ụgbọ elu chọrọ. Ọ nwere ike ịba uru site n'ọdụ ụgbọ elu dị nso. Anyị na-eme ka ị gaa n'ọdụ ụgbọ elu Zurich ma ọ bụ mba ndị agbata obi n'enweghị nsogbu ọ bụla, dị ka Airport Stuttgart ma ọ bụ Frankfurt am Main Europe.
Kpọtụrụ anyị maka njem ọ bụla, ma ị na-aga na ezumike na Switzerland, ma ọ bụ na-eme njem maka azụmahịa na Switzerland na azụmahịa.
Ọrụ taxi anyị
Ị na-ebi na Basel ma na-achọ ka ọrụ ịfefe ụgbọelu anyị Basel Airport Book? Enweghị nsogbu, anyị na-ebuga ndị mmadụ 7 na obere ụgbọ ala taxi n'otu oge ahụ tinyere akpa na ọdụ ụgbọ elu Basel, Zurich, Geneva ma ọ bụ ná mba ọzọ. Anyị na-ewetara gị nkasi obi ma na-aga n'ọdụ ụgbọ elu gị.
Ọrụ maka commuters & ụlọ ọrụ
Anyị na-ahụkwa ọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ, ndị ọrụ gị bụ ihe atụ na nkwari akụ dị na Basel ma chọọ ịkwaga obodo ọzọ, dịka ọmụmaatụ Zurich, Ma ọ bụ na ị ga-agagharị ma na-agagharị otu ụzọ kwa ụbọchị n'ime Basel. Anyị bụ onye gị na ya na-arụkọ ọrụ maka njem maka ndị na-enye ndị ọrụ ụlọ ọrụ na Switzerland na maka nnyefe ụgbọelu.
Kpọọ anyị ma ọ bụ zitere anyị SMS wee jụọ maka ọnụahịa anyị na-enye.
Ụgbọelu gị na-ebufe Basel.
Ọrụ Ntufe Ọrụ:
Ma mmadụ 1 ma ọ bụ mmadụ 7, ọnụahịa dị ọnụ ala
Na-eru nso Ụgbọ mmiri Zurich, Basel, Geneva na njem ná mba ọzọ
Enweghị ụgwọ ezoro ezo, ego niile echekwara
Enweghị ụgwọ ọrụ mgbe ị na-akwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ
Mkpakọrịta na ọrụ dị ike
Kpọọ anyị na nọmba na-esonụ:
Ekwentị: + 41 78 861 35 50